Xog: Arrin cusub oo ku soo korortay dagaalka Roobow iyo Al-Shabaab - Caasimada Online
Home Warar Xog: Arrin cusub oo ku soo korortay dagaalka Roobow iyo Al-Shabaab
Xog: Arrin cusub oo ku soo korortay dagaalka Roobow iyo Al-Shabaab
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar lagu kalsoon yahay oo nasoo gaaray ayaa sheegay in dagaalka Roobow iyo Al-Shabaab u weji cusub yeelan kadib markii maamulka Koonfur Galbeed ay billaabeen qorshe looga qeyb galinayo ciidamo Ethiopian ah.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu warramay inay diyaarinayaan gaadiid iyo ciidamo ka tirsan Ethiopia oo la geynaayo Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, halkaasi oo meel dhow ay ku dagaalamayaan Shabaab iyo Roobow.
Wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadaasi lagu biirin doono kuwa maamulka ee iminka ku sugan Magaalada Xudur ee gurmadka u ah wadaadka Mukhtaar Roobow, oo la doonayo in laga badbaadiyo kooxda Shabaab oo dooneysa inay disho.
Shabaab ayaa ka cabsi qabta in Roobow uu isku dhiibo dowladda, kadibna sir badan uu bixiyo, kadib markii laga saaray liiska Mareykanka.
Ciidamada Ethiopia ee la qorsheynaayo in loo daadgureeyo Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, ayaa laga howlgalin doonaa jihooyinka ay maleeshiyaadka ka weeraraan deegaanka Abal, oo uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Cali.
Ciidamada ugu badan ee ka tirsan kuwa Ethiopia ayaa la geyn doonaa deegaano 5KM ka baxsan deegaanka Abal oo ah Saldhiga ugu weyn ee uu ku sugan yahay Roobow.
Deegaanka Abal waxay qiyaastii 18km u jirtaa Magaalada Xudur, waxaana halkaa ka jira maamul u gaara Sheekh Mukhtaar Roobow, oo dhawaan laga saaray liiska shaqsiyaadka ay doondooneyso dowlada Mareykanka.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ciidamo aad u farabadan isugu geeyay deegaanka Baano oo 8KM u jirta Xudur, halkaasoo ay ku sugan yihiin Ciidamada dowlada iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed.
Illaa iyo hadda ma cadda goorta ciidamada Ethiopia ay ku biirayaan dagaalka, iyo sida Roobow uu kaga jawaabi doono arrintan, maadaama uu Ethiopia u arko cadow.